Isitolo esidayisa yonke impahla Mayelana NATHI | I-Aluminium entsha
Zhejiang okusha Aluminium Technology Co., Ltd.
Ubungcweti benza okuphelele, masenze okuningi ngokubambisana!
IZhejiang New Aluminium Technology Co., Ltd yasungulwa ngaphansi kokuqondiswa nguhulumeni ukusebenzisa isu likazwelonke le "One Belt and One Road" elizophuma lapho wonke umhlaba ubusenkingeni yezomnotho ngo-2008 .Siyisikali sebhizinisi lokukhiqiza nokuthekelisa ngokufunwa emakethe nakumakhasimende njengokuma kwethu; Ikhwalithi ephezulu, ubuchwepheshe kanye nokusebenza njengenhloso yethu futhi sizibophezele ekwakheni indlunkulu enhle kakhulu yamaShayina.Ikomkhulu lethu liseHangzhou, ngokubambisana nohulumeni wase-louyang, ngokuhlanganyela sibambe izimboni ezintathu ze-aluminium esifundazweni saseHenan.
Igama lenkampani Imvelaphi entsha ye-Aluminium kusuka kubuchwepheshe bokucubungula obuthuthuke kakhulu bokukhiqizwa kwe-aluminium emhlabeni.
Sine ukungenisa amasethi amabili 6-high CVC ezigayo rolling ezibandayo ezivela SMS Siemag, Germany; amasethi amabili emishini yokugaya evela eHercules, eJalimane; amasethi amathathu ka-2150 we-mill rolling mill evela e-Achenbach, eJalimane; isethi eyodwa yamamilimitha angu-2050 mm 6-high rolling rolling kanye namasethi amabili okulinganisa ukungezwani nokuhlanza imigqa evela ku-FATA Hunter, Itlay; eyodwa ithunyelwe ngosiko lokusika nokucheka kusuka kuDanieli, Itlay kanye neqoqo elilodwa le-Auto Packing Line kusuka ePosco, eSouth Korea.
Siphinde sibe nomugqa wokumboza wejubane owenziwe ngekhoyili ye-aluminium enemibala nomshini wokucindezela umbuthano we-aluminium kanye nemishini eyenziwe ngokwezifiso ngekhompyutha yazo zonke izinhlobo zemikhiqizo ye-aluminium
Sisebenzisa ubuchwepheshe bokucubungula obuphambili kakhulu be-aluminium emhlabeni futhi sithola izitifiketi ze-ISO 9001 ne-ISO 14001 kusukela ngo-2012. Sinamakhono agcwele wokuqinisekisa ikhwalithi yemikhiqizo ye-aluminium ngaphansi kwezidingo zakho
Ngenxa yethimba lethu lokukhiqiza eliqeqeshiwe, ithimba lobuchwepheshe kanye nethimba lesign, Sinomkhiqizo wethu othumela emazweni angaphezu kwama-30, kuze kube manje amaklayenti ethu anelisekile ngokuphelele ngathi.
Asibona abahamba phambili futhi abakhulu kunabo bonke, kepha singabachwepheshe futhi siqotho kakhulu, masenze okuningi ngokubambisana!